Mana isan’andro – Alarobia 22 Jolay 2015 – Athis Fanantenana
Mana isan’andro – Alarobia 22 Jolay 2015
Apokalispsy, Asan'ny Apostoly, Ezekiela, I Korintiana, Jaona
EZEKIELA 48. 15-35 F. 6
Jehovah no ao
Noharina matetika amin’ny Apokalyspy ny bokin’i Ezekiela.
Samy miandoha amin’ny fahitana be voninahitra sy manetriketrika, mitohy amin’ny fitsarana ary mifarana amin’ny hoavy sambatra. Fijery ety an-tany ihany ho an’i Ezekiela raha mitaha amin’ny Israely. Ny Apokalyspy kosa, mifanohitra amin’izay fa maneho ny fiainam-piangonana sy ny ho aviny ao amin’ny fiainan-danitra. Ilay tanàna masina tanisaina sy refesina no endrika izany ao amin’ny Apokalipsy 21. Mifandraika amin’ilay tanànan’i Jerosalema ety an-tany izany (30-35), manana vavahady roambinifolo misy ny anaran’ireo foko roambinifolo (Apokalypsy 21. 12).
« JEHOVAH NO AO » (35-b)
Anarana hamantarana ny tanàna. Mampatsiahy antsika ny amin’ny Jerosalema vaovao izay ho fonenan’Adriamanitra (Apokalyspy 21. 3 ). Dieny izao anefa dia isika no tiany hitoerany sy ho tempoliny (1 Korintianina 6. 19). Fiainana sy toetra manao ahoana no hanehoantsika izany ? Ao amintsika ve ny Tompo , manjaka sy manapaka tokoa ve ? sa iza no ao ?
Tsy ny zara hananana no hanome fiainana fa ilay Mpanome mihitsy (Jaona 10. 10), fa ny fandaminana tsara ( 15-29) dia tsy mijery ny anio ihany fa mijery ny ho avy koa, mahakasika ny saranga rehetra misy eo amin’ny fiaraha-monina, tsy misy diso anjara; endriky ny fitiavan’Andriamnitra ao amin’Kristy Jesoa ho an’ny olona rehetra (Asan’ny Apostoly 10. 34).
Teny mivohitra: Fitiavana, Tempoly
Mofon'aina - Alarobia 22…